एउटी युवतीका २ जना श्रीमानको जम्काभेट भएपछि पर्यो चर्काचर्की ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
February 27, 2021 AdminLeaveaComment on एउटी युवतीका २ जना श्रीमानको जम्काभेट भएपछि पर्यो चर्काचर्की ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
बुद्धिमायाको बेदना सुनेर हिमालको मन पग्लियो । र, दुबईबाट फर्किएर विहे पनि गरे । विहे गरेको ७ महिनापछि बुद्धिमाया ४ लाख रुपैया, सुनसहित पूर्व श्रीमान भूपालसँग भागेपछि यतिबेला न्याय खोज्दै भौतारिरहेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–१ की बुद्धिमायासँग हिमालको सम्पर्क टुटेको छ । ‘दुई छोरीको आमा हुँदा पनि मैले उसको पीडा सुनेर विहे गरे’ उनले भाबुक हुँदै भने–‘अहिले मलाई रुवाएर गई ।’
श्रीमति बुद्धिमायालाई नगद र सुन फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिँदा पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । यसैसाता श्रीमति बुद्धिमायासँग सम्पर्क गर्दा उल्टै धम्की दिएको उनले बताए ।हिमालकी दिदी निता राईले भाई सोझो भएकाले विदेशमा दुख गरेर कमाएको रकम लिएर बुहारी फरार भएको बताइन् । अहिले श्रीमती खोज्दै उनि उनको घर पुगेका छन् ।
भोलिको रा’शिफल हेर्नु’होस् : मिति २०७७ साल फाल्गुन १६ गते आईतबार ईश्वी सन् २०२१ फेब्रुवरी २८ तारिख